हे जनार्दन ! दलितकाे पुकार भगवानसम्म पु¥याई देउ « Online Sajha
हे जनार्दन ! दलितकाे पुकार भगवानसम्म पु¥याई देउ
जीवनको बारेमा के लेखु । जीवन वास्तवमै के हो ? जे भोगिरहेका छौँ अथवा जे पाइरहेका छौँ के हो? जो रहस्यमय छ । सुखलाई जीवन भनु कि र दःुखलाई जीवन भनु?
दुख पायमा पूर्व जन्मको पाप भनु कि ? सुख पाएमा पूर्व जन्मको पुण्य भनु ? कस्तो कन्फियुज्ड ?हे भगवान तेरो यो ब्रमाण्ड कहिले सम्म जिवित रहन्छ ? विभिन्न बाहानामा तानाशाही लादिरहन्छस ? हो त तानाशाही हो ? अब म, त विरुद्ध तेरै अदालतमा मुद्दा दायर गर्छु ।
चिल्लो कारमा सयर नारी वा पुरुषको सामुन्नेबाट एक बोरा बोकेर एउटा बालक एउटा जवान र एउटा वृद्ध हिनिरहेको हुन्छ । उस्ले त्यो कारको ढोका ढक्ढक्याउछ केही आशा सहित । बदलामा पाउछ गाली अपमान । अनि पाउछ खाते सडक छाप को बिल्ला उपमा । मन्दिर जाने बाटो तथा मन्दिर नजिकै थुप्रै असहाय अपांग बसेका हुन्छन । उनिहरु ठान्दछन । एक आसा सहित मन्दिरमा आउने सबै असल मानिस हुन । ठान्दछन भगवान कै शरणमा बसेपछी पक्कै हाम्रो उद्दार हुनेछ । तर कथित भक्तजनहरुले टाढैबाट ट्वाङ्ग्राङ आवाज आउने गरि एक सिक्का मिल्काउछन त्यो पनि मुखमा रुमाल राखेर । मन्दिरमा मुर्तीलाई खुवाउन दुनियाँ चिज लिएर जान्छन। त्यही मन्दिरको ढोकामा बस्ने असाहायको लागि एउटा चामलको दाना पनि लादैनन् । बिडम्बना महा पुजारि अनि महान मुर्ति पनि चुप लागेर बसिरहेका छन् आज सम्म । जात र पेसाको आधारमा फरक छुट्याइ भेदभाव गर्ने हाम्रो समाज दिनहु पुजापाठ प्रवचन पढेलेखेका कथित बुद्धिमानहरुले नै जात र पेसाको आधारमा व्यवहार गरेको पाइन्छ । इनिहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो सबैको रगत रातो हुन्छ । मन्दिर को अगाडी गेटमा बिरामी असाहाय रोगी भिखारी बसिरहेको हुन्छ । तर मन्दिरमा जाने कथित भक्तजन । भगवानको नाममा व्यापार गर्ने कथित पुजारी तथा मन्दिर भित्र आराम गर्ने मुर्तीले मतलब गर्दैनन् । जातको नाममा तिम्रो दरवारमा मेरो लागि प्रवेश निषेध गरियको छ। पधेरोमा जान बन्द गरियको छ । मैले छोएको यो समाजले खादैन । तर तिनैका आङ ढाक्न म नै चाहिन्छ । तिनका वस्तुभाउको पेट भर्न मैले बनाएको हतियार नै चाहिन्छ । तिनका पाइतलाको खिया जोगाउन मैले बनायको जुत्ता चाहिन्छ । तर तिनैको मन्दिर, पधेरो, चुल्हमा मेरो लागि “बन्द” को ब्यानर टाङ्ग्छन, न्याय गरि पाउ भगवान ।
यहाँ छोरीको रहर गर्ने आमाले । बुहारिलाई गन्दैनन् । आमाको रहर गर्ने छोरीले सासुलाइ गन्दैनन । यहाँ छोरीको भविष्य दाईजोमा निर्धारण गरिन्छ । म कसरी बाचु तेरो ब्रह्माण्डमा? यहाँ तेरै नामको ट्याटु बनाई मान्छे भगवान हुन्छ । तेरो नामको दुरुपयोग गर्दै करोडौं कमाउछन, तेरै नाममा व्यापार हुन्छ, तर जस्ताको तस्तै छु, म माथि दया गर भगवान ।
भर्खरै जाजरकोट र रुकुम जिल्लामा भएको हत्याकाण्ड बारेमा पनि धेरै कुराहरु आइरहेका छन् । कोहि भन्छन दलित भएकै कारण प्रेम स्वीकार भएन। कोहि भन्छन केटी अपहरण गर्नेलाई गाउलेले घेरा हालेर हत्या गरे। म कस्को कुरा पत्याउ?
जेभएपनी मान्छे मार्न पाइन्छ ? मान्छे के रांगा भैंसी खसीबोका अर्थात कुखुरा हास होर ?मार्नलाई । हामी कानुनी राज्यमा छाँै, देशमा संविधान छ, कानुन छ, जातमिलेन भन्दैमा प्रेम गर्ने मान्छेलाई मारिदिने हात खुट्टा बाधेर नदिमा फालिदिने ? हिजो दलितकै मुद्दालाई मोहरा बनाएर दश वर्ष युद्धको कमान्ड गर्ने डेपुटी कमान्डर अर्थात रुकुम जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ज्यान बचाउन खोज्दा भेडिमा हामफालेर मृत्यु र लाहात्ता भएका हुन् भन्नसम्म भ्याउनु भएछ । कमरेड कतै तपाईबाट पनि जातीयताकै गन्ध त आएको छैन ? यतिबेला तपाईको अग्नि परिक्षा हुँदैछ। याद रहोस् आज जुन स्थानमा हुनुहुन्छ । त्यो स्थानमा पु¥याउने हातहरु साउदी कतार दुवै मलेसियाका तातोघामहरुमा बेल्चा,हान्न विवश छाँै । यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानून बमोजिम हदैसम्म कारवाही होस् । हिजो तपाईको कासनलाई हामिले आफ्नो मृत्यु भन्दा प्यारो मानेर लडेको इतिहास ताजै छ। यदी यो घटनामा जातीयता कै गन्ध आयो भने यसले ठूलो परिणाम निम्ताउने छ ।
हिजो तपाइले हामिलाइ सिकाएका कुराहरु बिर्सेका छैनौ । हिजो तपाईं आफै जनमुक्ति सेनाहरुलाई पाल्पाको भुटुकेमा भनेका कुरा आजै जस्तो लाग्छ । कम्युनिस्टहरु नाताबाद कृपाबादमा कहिले अल्झिनु हुदैन। न्यायको पक्षमा सधै अगाडी उभिनुपर्दछ भनेको कुरामा म आजपनी बिस्वस्त छु कि नवराज बिकले न्यायपाउनेछन् ! कुन जातभित्रको प्रेम नै प्रेम हो भगवान? यो प्रश्नले हामिलाइ धेरै अफ्ट्यारो भयो, दलित भएकै कारण प्रेम गर्न नपाउने भए भनिदिनु पर्यो भगवान होइन। भने यति बिघ्न विभेद किन? दलितहरु मान्छे भएर पनि किन जनावरको जिन्दगी बाच्न बाध्य छन् ? किन बाध्य बनाइया े? भगवान तपाईले बनाएको नियमका ठेलिहरुमा विभेद गर भनेर भन्नुभएको छैन। तर मानिसको मस्तिष्कको आविष्कार गर्नेबेला तपाईं आफैले बनाएको नियमलाई ती मस्तिष्कहरुमा सेट गरेर पृथ्वीमा किन पठाउनु भएन?
पृथ्वीमा भएका केही मानवरुपि दानवहरुले गर्दा आज मान्छे—मान्छे बीचमा जातको तगारो बनाइदिएको छ । श्रम चल्छ , सीप चल्छ, श्वास चल्छ । बिहेगर्दा जात सोधिन्छ “ सायद यि दानवहरुलाइ थाहा रहेनछ । संसारमा जात मात्र दुईवटा हुन्छ । त्यो हो एक महिना दोर्सो पुरुष घटनाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । किनकि दलित भनेर भेदभाव नागरिकले गरेका होइनन्। हमीलाई नेपाल सरकारले गरेको छ। “दोषी नेपाल सरकार हो ।“ संविधानमा किन दलित भन्नेशब्द राखिएको छ ? यी शब्द राखेर सरकारले एउटा नेपालीले एउटा नेपालीलाई अछुत बनाइरहेको छ । जबसम्म नेपाल सरकारले संविधानबाट दलित भन्ने शब्द खारेज गर्दैन तबसम्म दलित भनेर हेपाइ खेपिरहनु पर्ने छ । दलितको नाममा सरकारबाट छुट्टाइने कोटाहरुपनी खारेज गरियोस् । यि सब यथासिग्र खारेज गरिनुपर्छ । दलितको नामामा बादिने जतिपनी भत्ता सहयोगहरु छन् । ति सबै हताइनु पर्छ । ती सहयोगहरु दलितको नाममा होइन। गरिब बेरोजगारी भनेर बादिनुपर्छ त्यसमा जुनसुकै जातको पर्नसक्छ ती राहतहरुमा समावेशिता झल्किनु पर्छ ! त्यसलगत्तै समस्त दलित—दलित बीचको भेदभावलाई आपसी सहमतिद्वारा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । परिवर्तन भन्नेकुरा अरुलाई भन्न सजिलो देखिन्छ । तर आफुले गर्न गाह्रो हुन्छ। पहिला परिवर्तन हामिले म भन्ने शब्दबाट सुरुगरौँ । त्यसपछि समाज परिवर्तन बिस्तारै आफै हुनेछ ।(लेखक:
सामाजिक अभियन्ता हुन् । हाल मलेसिया)